စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအငြင်းပွားမှုများကို ဖြေရှင်းပေးမည့် မြန်မာအနုညာတဗဟိုဌာနကို UMFCCI တွင်ဖွင့်မည် - Yangon Media Group
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအငြင်းပွားမှုများကို ဖြေရှင်းပေးမည့် မြန်မာအနုညာတဗဟိုဌာနကို UMFCCI တွင်ဖွင့်မည်
မြန်မာ့အနုပညာ ဗဟိုဌာနမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားအကြိုအခမ်းအနားကျင်းပစဉ်။ ဓာတ်ပုံ - TTMT
ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၃၁- စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များအကြား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုများ ကို ဖြေရှင်းပေးမည့် မြန်မာအနု ညာတ ဗဟိုဌာန(Myanmer Arb- itration Center)ကို ဩဂုတ်၃ရက် တွင် UMFCCI ရှစ်လွှာတွင်ဖွင့် လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယနေ့ နိုင်ငံတကာတွင်ချုပ်ဆို သည့်စာချုပ်များအပါအဝင် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်မှုအတွက် ချုပ်ဆိုသည့် စာချုပ် ၁ဝဝရာခိုင်နှုန်းပြည့်
တွင် အငြင်းပွားမှုဖြစ်ခဲ့ပါက Arbitration ဖြင့် ဖြေရှင်းမည်ဟုထည့်သွင်းချုပ် ဆိုမှုများရှိလာကြောင်း UMFCCI ၏အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ဒေါက်တာမောင် မောင်သိမ်းက ပြောသည်။
ဇူလိုင်၃၁ရက်က UMFCCI ၄လွှာတွင်ပြုလုပ်သည့် မြန်မာအနု ညာတဗဟိုဌာန (Myanmer Arb-itration Center) မိတ်ဆက်ပွဲအ ခမ်းအနား အကြိုသတင်းစာရှင်း လင်းပွဲတွင် အထက်ပါအတိုင်းထည့် သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“”တရားလွှတ်တော်ရုံးက ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ သူ့သက်ဆိုင်ရာရုံးတွေကို အမိန့်ထုတ်တာမှာ Arbitrate(ကြား ဝင်စေ့စပ်ပေး)တာတွေနဲ့ပတ်သက် လို့ လိုအပ်ရင်အောက်ပါအဖွဲ့အစည်း များကို ဆက်သွယ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အဆက်အသွယ်မှာ UMFCCIက ပထမဆုံးမှာပါလာတော့ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ Arbitration Center တွေထောင် ဖို့လိုတယ်ဆိုပြီး UMFCCI က ဦး ဆောင်ပြီးလုပ်တယ်””ဟု ၄င်းက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် Arbitration ဥပဒေကို ၁၉၄၄ခုနှစ်က အိန္ဒိယ Arbitration ဥပဒေကို တိုက်ရိုက် ယူကာပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အံမဝင်မှုများရှိသော်လည်း ဆက် လက်ကျင့်သုံးနေခဲ့ရာမှ ၂၀၁၆ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၅ရက်တွင် ၁၉၄၄ဥပဒေ ကိုပယ်ဖျက်၍ အနုညာတစီရင်ဆုံး ဖြတ်ခြင်းဥပဒေကို ပုဒ်မပေါင်း၅၈ခု ဖြင့်ပြန်လည်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။
“”ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကို ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ နိုင်ငံတကာ နဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့အခါမှာ Arbitrationတွေထည့်ကြတာပေါ့။ မြန်မာ မှာ Arbitrationက မယ်မယ်ရရမရှိ သေးတော့ နိုင်ငံတကာArbitration နဲ့ဖြေရှင်းမယ်ဆိုတာကို ထည့် တယ်။ အငြင်းပွားမှုဖြစ်ခဲ့ရင် စင် ကာပူမှာဖြေရှင်းမယ်။
လန်ဒန်မှာ ဖြေရှင်းမယ် စသည်ဖြင့်ထည့်တယ်။ အဲဒါတွေထည့်တာက မြန်မာတွေ အတွက်တော့ အခက်အခဲတွေရှိ တာပေါ့ ။ ဥပမာအငြင်းပွားမှုပေါ် လာရင် လန်ဒန်မှာသွားဖြေရှင်းမယ် ဆိုစရိတ်ကမနည်းဘူး။ ဟိုရောက် ရင် ဘာသာစကားအခက်အခဲ၊ သူ တို့ဥပဒေတွေသေချာမသိတော့ သူ တို့ရှေ့နေတွေငှားနဲ့ စရိတ်စကတွေ အများကြီးကုန်တယ်။ ဒါကြောင့်အ ငြင်းပွားမှုဖြစ်ရင် မြန်မာဘက်ကမှန် နေပေမယ့်လည်း Arbitration မသွား နိုင်ရင် ရှုံးတာများတယ်””ဟု ဒေါက် တာမောင်မောင်သိမ်းက ပြောသည်။
အငြင်းပွားမှုတွေပေါ်ပေါက် လျှင် တရားရုံးသွားဖြေရှင်းခြင်းထက် အနုညတနည်း(ခုံသမာဓိနည်း)ဖြင့် ဖြေရှင်းခြင်းမှာ ပိုကောင်းသည့်အ တွက် နိုင်ငံတကာစာချုပ်များ၊ ကူး သန်းရောင်းဝယ်မှုနှင့် ပတ်သက် သည့် စာချုပ်များ၌ အငြင်းပွားမှုပေါ် ပေါက်ခဲ့လျှင်(ခုံသမာဓိနည်း)နှင့် ဖြေ ရှင်းမည်ဟု ထည့်သွင်းချုပ်ဆိုကြ ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“”စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ အနေနဲ့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုချိန်မှာအငြင်း ပွားမှုဖြစ်ပေါ်လာရင် ဘယ်နိုင်ငံက ခုံရုံးနဲ့ ဖြေရှင်းပါမယ်ဆိုတာကိုထည့် သွင်းချုပ်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ နိုင်ငံကိုရွေးမယ်ဆိုပြီး ထည့်သွင်း ချုပ်ဆိုရင်တော့ ၂၀၁၆ခုနှစ်ဥပဒေနဲ့ အညီ ကျင့်သုံးဖြေရှင်းပေးမှာဖြစ် ပါတယ်””ဟု မြန်မာအနုညာတဗဟို ဌာန မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာဦးနှင်းဦး ကပြောသည်။
မြန်မာအနုညာတဗဟိုဌာနကို ဖွဲ့စည်းထူထောင်လိုက်ပြီဖြစ်သဖြင့် နိုင်ငံတကာနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ် မှုဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုများဖြစ်ပေါ် လျှင် နိုင်ငံခြားသွားဖြေရှင်းရန်မလို တော့ဘဲ ပြည်တွင်း၌ပင်ဖြေရှင်းနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းဗဟိုဌာနအနေဖြင့် စက် တင်ဘာလမှစ၍ လုပ်ငန်းများစတင် လည်ပတ်မည်ဖြစ်ပြီး ရာဇဝတ်မှုမှလွဲ ၍ စီးပွားရေးဆိုင်ရာအငြင်းပွားမှု များကို ဖြေရှင်းပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာအနုညာတဗဟိုဌာန တွင် ဖြေရှင်းမှုပြေလည်မှုမရလျှင် တရားရုံးသို့ အယူခံဝင်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းဗဟိုဌာနတွင် ဖြေရှင်းလျှင် တရားရုံးကြန့်ကြာမှုထက် အချိန်ပိုမို သက်သာစေမည်ဖြစ်ပြီး ခုံသမာဓိ လူကြီးများအနေဖြင့် အဂတိလိုက် စားမှုရှိလာလျှင် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေ နှင့်အညီ အရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဂလက်စတွန် ဘယ်ရီပွဲတော်မှာ Spice Girls အဖွဲ့နဲ့အတူ ဖျော်ဖြေချင်နေတဲ့ ဗစ်တိုးရီးယား ဘက်ခမ်း
မကွေး တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီး၏ လူမှုရေးပြဿနာ ဒီချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဆုံးဖြတ်၊ ပါတီတွင်းကိ??
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှ အကြားအာရုံမသန်စွမ်းသူ မစုဝေလင်း နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
ရှေ့မှာဟောတာက ပါးစပ်၊ နောက်ကျောမှာက သေနတ်
လူမနေသော ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်ရှိ ကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်သို့ ဘင်္ဂါလီ တစ်သိန်းပို့ရန် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ??
အမျိုးသားပြတိုက်(ရန်ကုန်) မီးဘေးလုံခြုံရေးအတွက် အလိုအလျောက် အရေးပေါ် မီးအချက်ပေးစနစ် တပ်ဆင??